Dabkii suuqa Bakaaraha oo la damiyay iyo qasaare lixaad leh oo ka dhashay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dabkii suuqa Bakaaraha oo la damiyay iyo qasaare lixaad leh oo ka dhashay (SAWIRO)
Waxaa lagu guuleystay in la damiyo gebi ahaan dabkii aadka u xooganaa ee saakay aroortii ka kacay qeybo kamid ah suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, iyadoona dabkaasi uu baabi’iyay goobo ganacsi oo aad u badan.
Dabkaan ayaa la sheegay inuu ka bilawday meel lagu gado Bunka oo ku dhaw suuqa cusub ee Khaliifa, wuxuuna dabku si deg deg ah markii dambe ugu faafay qeybo badan oo ka mid ah suuqa Bakaaraha, gaar ahaan dhinaca maacuunta, malabka iyo dahablaha.
Sidoo kale, dabkaasi ayaa socday ku dhawaad muddo 5 saacadood, waxaana adkaatay in gaadiidka dab damiska ah ay si deg deg ah ku damiyaan dabkaas, waxaana markii dabe suuqa la keenay gaadiidka cagaf cagafta kuwaas oo markii dambe iyana ka qeyb qaatay daminta dabka.
Dhinaca kale, qasaare aad u badan oo isugu jirta mid maaliyadeed iyo mid nafeedba leh ayaa ka dhashay dabka xoogan ee saakay qabsaday qeybo kamid ah suuqa Bakaarahaa, waxaana halkaasi ku hanti beelay dad badan oo saacado kahor lahaa hanti ay noloshooda ku maareyn jireen.
Dabkaan ayaa sida la xaqiijiyay ku geeriyootay 4 qof, halka 2 kale ay ku dhaawacantay, sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah wariyaasha booqday goobta laga soo saaray meydadka dadkaasi dabka ku geeriyooday.
Ugu dambeyntii, dabka ayaa lagu guuleystay in la baqtiyo, waxaana daminta dabkaasi si weyn uga qeyb qaatay gaadiidka dab damiska gobolka Banaadir iyo kuwa shirkadda Hormuud oo dadaal xoogan ku bixiyay sidii ay ku damin lahaayeen dabkaas.
Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah ganacsatada suuqa Bakaaraha ayaa dabkii saakay ku tilmaamay inuu ahaa dabkii ugu xoganaa ee suuqaasi qabsada, waxaana dad badan soo xasuusteen xilliyo hore uu dab ceynkaan oo kale hanti badan u baabi’iyay.